अन्तर्राष्ट्रिय Arbitrators फेला
घर / अन्तर्राष्ट्रिय Arbitrators फेला
एक मामला तल प्रदान गरिन्छ लागि अन्तर्राष्ट्रिय arbitrators अनलाइन संसाधन फेला पार्न, कसरी arbitrators चयन गर्न को साथै एउटा विवरण. यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता मा एक महत्वपूर्ण कदम हो, पछि विभिन्न arbitrators दिइएको मामला आदर फरक निष्कर्ष पुग्न सक्दैन.
arbitrators को नियुक्तिका लागि मानक मा पाउन सकिन्छ arbitral नियम यस पार्टीहरू रोजेका, र मा स्थानीय मध्यस्थता कानून मध्यस्थता को ठाँउ. एक स्वतन्त्रता वा निष्पक्षता को कमी एक arbitral पुरस्कार को निराकरण सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यसलाई चासो कुनै पनि वास्तविक या कथित संघर्ष बच्न आवश्यक छ.
को अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता मा ब्याज को द्वन्द्व मा आईबीए दिशानिर्देश बचा पर्छ भनेर चासो को संघर्ष चिन्न मदत. अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता मा, यसलाई पूरा वा बोल्न अपेक्षा छ एक नियुक्त गर्नु गर्न निर्णय अघि सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय arbitrators. यो तिनीहरूले मामला मा शासन गर्न भरोसा अन्तर्राष्ट्रिय arbitrators फेला पार्न दल अनुमति दिन्छ.
न्यूनतम मा, सबै arbitrators पर्छ हुन:
स्वतन्त्र विवाद गर्न पार्टीहरूलाई; र
निष्पक्ष विवाद को विषय आदर.
दलहरू पनि गर्ने छ अन्तर्राष्ट्रिय arbitrators फेला गर्नुपर्छ:
महत्वपूर्ण पूर्व अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता मा, एक निर्णायक रूपमा आदर्श;
को मा Fluency भाषा को मध्यस्थता को;
को को ज्ञान ठोस व्यवस्था मुद्दा मा;
लागू ज्ञान arbitral नियम;
विशिष्ट ज्ञान विवाद क्षेत्रमा अत्यधिक प्राविधिक विषयमा लागि;
निष्ठा, बुद्धि र विस्तार गर्न ध्यान;
पर्याप्त समय प्रश्न मामला गर्न समर्पित गर्न; र
मामला व्यवस्थापन कौशल एक कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न.
धेरै स्वचालित उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय arbitrators अनलाइन अवस्थित पाउन. सबै भन्दा राम्रो को संभावना छ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संस्थान को खोज उपकरण, जबकि एएसए डाटाबेस नजिकको धावक-अप छ. को CIArb खोज उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय arbitrators फेला पार्न उपयोगी हुन सक्छ, हुनत सदस्यहरु को पूर्व अनुभव थप चर छ. धेरै अन्य अनलाइन उपकरण arbitrators अवस्थित चयन गर्न, जो पनि तल पहुँच गर्न सकिन्छ.
तपाईं पनि सक्छन् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस, र हाम्रो मध्यस्थता वकील को एक भाषा आधारित व्यक्तिगत सिफारिसहरू उपलब्ध हुनेछ, तपाईं हामीलाई प्रदान देश र अन्य विशेषताहरु.
निःशुल्क अनलाइन उपकरण अन्तरराष्ट्रीय Arbitrators खोज्नुहोस.
पेरिस मा आधारित, को आइएआइ बटोरता चिकित्सकहरु र शैक्षिक मध्यस्थता मा विशेषज्ञता. यो एक विशिष्ट निर्णायक पहिचान गर्न एक बृहत खोज विकल्प साथै यसको सदस्य-arbitrators एक वर्णमाला सूची प्रदान गर्दछ. यो arbitrators चयन गर्न सबैभन्दा उपयोगी अनलाइन उपकरण मध्ये एक छ.
प्रयोग गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
मध्यस्थता व्यवस्था एउटा भर्चुअल पुस्तकालय, मध्यस्थता कानून पनि एक बृहत खोज विकल्पको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा राम्रो arbitrators सूची राख्छ.
स्विस मध्यस्थता संघ (एएसए)
एएसए arbitrators एक खोज डेटाबेस राख्छ. दलहरू विभिन्न मापदण्ड चयन गर्न सक्नुहुन्छ, कानुनी पृष्ठभूमि जस्ता, विशेषज्ञता र राष्ट्रियता को क्षेत्र.
CiArb सदस्य निर्देशिका
CiArb संभावित arbitrators र mediators हजारौं को एक खुला खोज सूची छ. सबै महत्वपूर्ण अनुभव, तर CiArb खोज फिल्टर कि arbitrators आफ्नो देश को आधारमा चयन गर्न अनुमति दिन्छ प्रदान, भाषा र पेशा. एक विशेष प्राविधिक विशेषज्ञता एउटा निर्णायक खोजिरहेका जब यो उपयोगी हुन सक्छ (उदाहरणका एक shipbroker लागि).
दलहरू विभिन्न मापदण्ड चयन गर्न सक्नुहुन्छ, कानुनी पृष्ठभूमि जस्ता, विशेषज्ञता र राष्ट्रियता को क्षेत्र.
बेलायत स्थित, Clerks कोठा मध्यस्थता मामिलामा विशेष arbitrators सूची राख्छ.
ICSID एक अग्रणी संस्था लगानी मध्यस्थता प्रशासन छ. arbitrators एक सूची र एक उन्नत खोज विकल्प यसको वेबसाइटमा उपलब्ध छन्.
न्यायिक मध्यस्थता र मध्यस्थता सेवा इंक. (जाम)
मध्यस्थता अवस्थामा प्रशासन एक अमेरिकी कम्पनी, जाम arbitrators यसको रोष्टर बीच एक व्यक्ति चयन गर्न एक बृहत खोज विकल्प प्रदान गर्दछ.
लिंकन गरेको Inn फिल्ड
24 लण्डन लिंकन गरेको Inn फिल्ड (बेलायत) arbitrators को एक नम्बर को लागि प्रशासनिक सेवा र सुविधा प्रदान गर्दछ. सबै arbitrators को पाठ्यक्रम vitae गर्ने माध्यम सम्पर्क गर्न सकिन्छ 24 लिंकन गरेको Inn फिल्ड, यसको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिन्छ.
वाणिज्य पोलिस च्याम्बर
वाणिज्य पोलिश च्याम्बर दिइएको मामला लागि विचार लायक छन् देशहरूको एक किसिम ले arbitrators एक खोज सूची राख्छ.
अवस्थामा व्यवस्थापन जो एक प्रमुख मध्यस्थता संस्थाका रूपमा, यसको वेबसाइटमा SIAC सूची, देश, arbitrators यसको रोष्टर गर्न स्वीकारे गरिएको छ जो सबै व्यक्तिहरूलाई.
सदस्यता मात्र संसाधन अन्तरराष्ट्रीय Arbitrators खोज्नुहोस.
सदस्यता मात्र स्रोतहरू विरलै आवश्यक, तिनीहरूले माथि सूचीबद्ध मुक्त स्रोतहरू द्वारा चढाएको परे सानो जानकारी प्रदान रूपमा. तल भुक्तानी स्रोतहरूको केही विवाद लागि सही निर्णायक फेला पार्न मद्दत गर्ने हो.
अमेरिकी मध्यस्थता संघ (एएए)
एक अग्रणी arbitral संस्थाले प्रशासन अवस्थामा रूपमा, arbitrators को सूची संग एएए वर्तमान दल. यस्तो सूची प्राप्त गर्न देय शुल्क समावेश arbitrators संख्या निर्भर. यो संस्थाले गरेको नियम अन्तर्गत मध्यस्थता लागि उपयोगी हुन सक्छ.
लगानी दावी एक मध्यस्थता डेटाबेस छ, जो स्वराज समूह को भाग हो. यो स्रोत उपलब्ध छ मा मध्यस्थता काम गर्ने सबै arbitrators को सूची विस्तृत मामलाहरु.
क्लुवर आइएआइ मध्यस्थता उपकरण
क्लुवर गरेको सदस्यता मात्र स्रोतहरू अधिकांश उत्कृष्ट छन् तापनि, यो चाहिँ, जो आइएआइ संग अग्रानुक्रम मा विकसित भएको थियो, निःशुल्क आइएआइ वेबसाइट जस्तै arbitrators सूची समावेश गर्दछ र धेरै हदसम्म नै जानकारी को एक repackage छ.